Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobey ayaa maanta shir aan caadi ahayn ka yeeshay arrimaha Somaliya, iyadoo shirku ahaa mid golaha looga xog waramayay hawlgalada UNSOM (Qaramada Midoobey) iyo AMISOM.
Golaha Ammaanka ayaa warbixino ka dhageystay James Swan, Wakiilka Qaramada Midoobey ee Somaliya iyo Francisco Madeira, Wakiilka Midowga Afrika ee Somaliya. Labaduba waxay ka hadleen doorkooda ku saabsan taageeridda geedi-socodka xasilinta dalka iyo xoojinta Dowladnimada Somaliya.
James Swan oo soo hadalqaaday arrimaha doorashooyinka ee dalka ayaa ku ammaanay Madaxda Dowladda Federaalka iyo kuwa Dowlad Goboleedyad inay isu tanaasul muujiyeen, isla-markaana ay isla qaateen hannaan doorasho oo wada-ogol ah.
Swan ayaa xusay in sanadka soo socda ee 2021 uu noqon doono mid kala guur ah, isla-markaana ay Somaliya hoggaamin doonto masuuliyadda amnigeeda, waana mid xoojineysa qorshaha bilowga ah ee dalka looga saarayo Ciidanka Nabad Ilaalinta ee Midowga Afrika.
Wakiilada Britain, Faransiiska iyo Mareykanka ee Golaha Ammaanka ayaa iyaguna ka hadlay shirka.
Ra’iisal Wasaaraha Somaliya, Maxamed Xuseen Rooble oo shirka kaga qaybgalay muuqaalka foggaan-aragga ayaa sheegay inay Somaliya ka go’an tahay qabashada Doorashada Xildhibaanada Golaha Shacabka daba-yaaqada sanadkan, midda Madaxtooyadana ay qaban doonto bilowga sanadka soo socda.
Ra’iisal Wasaaraha ayaa tilmaamay in xukuumaddiisa ay ka go’an tahay inay dalka ka qabato doorasho xor iyo xalaal ah, ayna ilaalin doonto qoondada haweenka ee boqolkiiba soddon (30%) iyo inay haweenku ka qayb qaataan heerarka kala duwan ee dowldnimada dalka.
Rooble ayaa soo hadalqaaday in xafiiskiisu uu guddi u xilsaaray, oo ka shaqeeya khariiradda doorasho qof iyo cod ah oo dalka laga qabto 2024/25, isagoo intaa ku dray inay durbaba ka soo diyaariyeen, soona gudbiyeen qoraal qabyo ah, oo dhawaan la horgayn doono Golaha Wasiirada. Rooble ayaa Golaha Ammaanka u sheegay in xukuumadda ay Xubnaha Guddiyada La-dagaalanka Musuq Maasuqa iyo Xuquuqul Insaanka u gudbin doonto Baarlamaanka.
Previous articleR/Wasaaraha oo Magaalada Baydhabo ka dhagax dhigay Mashaariic horumarineed (SAWIRRO)
Next articleWararkii ugu dambeeyay Shirka Musharaxiinta Mucaaradka iyo saamaynta uu yeelan karo